The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Dr Idris Xasan Diiriye iyo isu dubaridihii (Director) filimkii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee ugu horreeyay ee magaciisa la odhan jiray DAN IYO XARAGO.
Dr Idris Xasan Diiriye iyo isu dubaridihii (Director) filimkii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee ugu horreeyay ee magaciisa la odhan jiray DAN IYO XARAGO.
Dr Idris Xasan Diiriye: Geesiga Runta Ah Ee Gadabuursi Ee Tol Waayay..!
Dr Idris Xasan Diiriye waa aasaasihii Ururkii Siyaasadeed ee matalayay bulsho-weynta beelaha Samaroon ee ku nool Galbeedka soomaaliyeed ee magaciisa la odhan jiray SDA. Nin kastaba ha iska faanee, fikradda, farsamada, faafinta iyo fulinta ururkaas SDA waxa dhammaantood iska lahaa Idris, beeni maxay qaban . Sidoo kale Dr Diiriye waa isu dubaridihii (Director) filimkii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee ugu horreeyay ee magaciisa la odhan jiray DAN IYO XARAGO.
Taariikhda Idris halkan laguma soo koobi karo . Waa aqoonyahan, waa macalin, waa siyaasi, waa suxufi, waa fannaan, waa abwaan, waxan odhan karaa waa macalinka codkiisa iyo odhaahdiisaba ay ku daydaan macalimiinta Soomaaliyeed ee caanka ah sida Dr Axmad Ismaaciil Samatar. Intaas oo kaliya ayaa idin dareen siin karta haybada iyo karaamada iyo miisaanka uu leeyahay Dr Idris Dirie. Waxan ku tibaaxi karnaa inuu yahay nin in fog ka horeeyay faciisa walina ilaa iyo imikadaas an la soo wada gaadhin halkii uu joogay 30 sanadood ka hor. Idiris waxa aad loogu bartay wararkiisii iyo barnaamijyadiisii ka bixi jiray idaacadda BBC Somali Service, halkaasi oo uu ka mid ahaa hawl wadeenada ugu darajada sarreeyay uguna caansan ee bahda BBC.
Dr Idris Dirie isaga oo matalaya ururka SDA ayuu ka qayb galay shir lagu qabtay Addis-Ababa Itoobiya 1993 oo lagu dhexdhexaadinayay Ummadda Soomaaliyeed, sidoo kale wuxu ka qaby galay shirir kale oo la xidhiidha arrimaha Soomaaliyeed. Waraysiyo badan ayaa Idris lala yeeshay uu ku difaacayo qaddiyada SDA iyo aragtida midnimada iyo jiritaanka Soomaaliweyn. Mid ka mid ah waraysiyadaas ayaynu nasiib u yeelanay inaan halkan idinkula wadaagno.
Somali Peace Conference in Addis Ababa, Ethiopia. Shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa, Ethiopia. 1993dii. Qeybtii 15aad.
Dr Idris Xasan Diiriye iyo isu dubaridihii (Direct...